Serivisy aorian'ny varotra - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Q1: Inona no hatolotra ho an'ny serivisy mialoha ny fivarotana?
A1: Ho fanampin'ny fangatahana laharan'ny vokatra, dia manome ny mari-pamantarana ara-teknika ihany koa izahay. Ho an'ny baiko voalohany, santionany iray na roa maimaim-poana dia azo atolotra tsy misy sarany fitaterana.
Q2: Ahoana ny momba ny serivisy fivarotana?
A2: Hifidy ny fitaterana miaraka amin'ny vidiny kely indrindra ho an'ny mpanjifa izahay. Samy homena lalao feno avokoa ny fizarana teknika sy ny sampan-draharaha misahana ny fiantohana, mba hiantohana ny vokatra avo lenta. Ny mpiasan'ny varotra anay dia hampandre anao ny fivoaran'ny fitaterana. Ho fanampin'izany, hamolavola sy hahalavorary ny taratasy fandefasana entana izy ireo.
Q3: Mandra-pahoviana ny fe-potoana fiantohana kalitao? Inona no votoatin'ny serivisy aorian'ny varotra?
A3: Eo amin'ny sehatry ny fampiharana ara-dalàna sy ny menaka maotera tsara:
Vanim-potoana fiantohana ny sivana rivotra: 2,000 ora;
Vanim-potoana fiantohana ny sivana solika: 2,000 ora;
Separator Air Oil External Type: 2,500 ora;
Naorina-in karazana Air Oil Separator: 4,000 ora.
Mandritra ny vanim-potoana antoka momba ny kalitao dia hosoloinay ara-potoana izany raha mandinika ny mpiasa ara-teknika izahay fa misy olana lehibe momba ny kalitao ny vokatra.
Q4: Ahoana ny momba ny serivisy hafa?
A4: Ny mpanjifa dia manome ny vokatra modely, nefa tsy manana modely toy izany. Amin'ity toe-javatra ity dia hamorona modely vaovao ho an'ny vokatra isika raha tratra ny baiko farany ambany indrindra. Ankoatr'izay, hanasa tsindraindray ny mpanjifa izahay hitsidika ny orinasanay ary handray ny fiofanana ara-teknika mifandraika amin'izany. Ankoatra izany, afaka miditra amin'ny mpanjifa ihany koa izahay ary manolotra fiofanana ara-teknika.
Q5: Misy serivisy OEM ve?